TechWikies.com | Zvese nezveTekinoroji kubva kutenderera Nyika
Zvese nezveTekiniki Kubva Kutenderera Nyika
Mamwe matambudziko! WhatsApp Web inoburitsa huwandu hwevashandisi pa internet
Ipo ichiedza kuzvidzivirira uye kuvimbisa veruzhinji kana zvasvika kune yavo nyowani mutemo, WhatsApp yakave zvakare nyaya yekukakavara. Imhaka yekuti […]
Runyerekupe runoti GTA 6 inogona kuhwina yakawanda "smart" NPCs
Iyo patent nyowani yakamisikidzwa naTake-Mbiri Inopindirana - iyo kambani iri kumashure kweRockstar - inogona kuratidza kuti anovandudza Grand Theft Auto anogona kunge aine hurongwa hwekushandisa kugadzirisa kuNPCs, kana mavara asingatambe, muGTA 6. Zvinoenderana negwaro, iro yakanyoreswa muna Gumiguru 2020 uye ichingova kuwanikwa nekugovaniswa […]
Apple inotarisana nematare eUS inoda kubviswa kweTeregiramu kubva kuApp Store
Apple inoronga kuita shanduko kune kutaridzika kweanouya iMac mamodheru
WhatsApp: mushure memakakatanwa pamusoro pekuvanzika, mutumwa anoedza kusimbisa vashandisi
Huawei AppGallery inokunda kugadzirisazve yakakamurwa muzvikamu zvina
Microsoft Inowedzera Magiya 5, Maseru Akafa, uye Mimwe Mitambo kuXbox Game Pass munaGunyana
Nyamavhuvhu haasati atanga uye Microsoft iri kutopa nhau dzakanaka kuXbox platform vatambi sezvo kambani ichangoburitsa runyorwa rwemitambo ichaverengerwa pamwedzi uno Game Pass. Uye kushamisika kwevashandisi, iko kunyorera sevhisi kuri kupa vatengi mukana wekutamba mutambo maGiya 5, inova yeMicrosoft […]
Yakanakisa Yemahara Yemahara Ekuparadzira masevhisi mu2019
Iyo mashanu akanakisa Mutambo weGamba wemari isingasviki makumi mashanu euros
Iwo mashanu akanakisa mapurogiramu ekutevedzera Android pakombuta yako
Intel's HEDT Platform ichave Yakakamurwa kuita Mbiri: Z399 uye X599
Ipo ichiedza kuzvidzivirira uye kuvimbisa veruzhinji kana zvasvika kune yavo nyowani mutemo, WhatsApp yakave zvakare nyaya yekukakavara. Imhaka yekuti muongorori wezvekuchengetedza akazivisa svondo rino kuti mutumwa ari kufumura nhamba yefoni yezviuru zvevashandisi. Sekureva kwaRajshekhar Rajaharia, iyo webhu vhezheni yemutumwa ine mwena […]
Shot pa iPhone: Apple inoburitsa mifananidzo yakatorwa kuburikidza ne lens yeiyo iPhone 12
MunaGumiguru wegore rapfuura, Apple yakaita mutsetse wazvino uno weserura, nekuuya kwemhando ina itsva: iyo iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, uye iPhone 12 Pro Max. Izvo zvishandiso zvinonakidza kune zvese kutaridzika uye mashandiro eiyo nyowani A14 Bionic chipset. Nekudaro, iko kusimudzira kwehardware kunoenda kwete chete kune […]
Kufanana neGoogle, Apple yakabvisawo Parler kubva kuchitoro chayo. Sekureva kweiyo hofori yeCupertino, chikonzero chikuru chekutora danho ndechekuti pasocial network haina chinodzivirira kune zvine hukasha. Zvisinei, kubvisa purogiramu kubva kuzvitoro zvikuru uye kunyange kuvhara Amazon kwakakonzera vazhinji vevashandisi vaParler kupotera muTeregiramu. Somugumisiro, […]
Apple inogona pakupedzisira kuve nehurongwa hwekugadzirisa patsva kutaridzika kweayo ese-mu-one madhesiki, iyo iMacs. Sekureva kwewebsite yeBloomberg, iyo yakataura masosi "vanoziva" nenyaya iyi, iyo Cupertino kambani yakwanisa kuisa shanduko hombe pakuonekwa kwemakomputa kubvira 2012. Zvinoenderana newebhusaiti, shanduko dzine kudzikisira zvishoma […]
Mushure mezviuru zvevashandisi vatama kubva paWhatsApp kuenda kuSignal neTeregiramu, nekuda kwesarudzo yemutumwa yekugovana data revashandisi neFacebook - chimwe chinhu chakazoguma chadzoserwa kuna Chivabvu - iyo app inoita kunge yanga ichinetsekana nezve zvese zvakaipa. Ndiko nekuti akafunga kutumira akateedzana mamiriro kuti ayedze kudzikamisa […]
Iyo AppGallery, yepamutemo yeApple shopu chitoro chakarova pamusika kuyedza kutsiva Google Play Chitoro, iyo yakarambidzwa nehurumende yeUS kubva pakuverengerwa mufoni yechiratidzo, iri kukura. Sekureva kwemugadziri, yatova chitoro chechitatu pakura kwazvo pasi rese, kuseri kweGoogle neApple chete, uye zvishoma ne […]
Zvizere zvakakwana: SmartThings iri kuwana kusangana kukuru neGoogle Nest zvishandiso
Muna 2020 takazivisa kuti Samsung yanga ichitoshanda kuunza kusangana kweStartThings nemidziyo yeGoogle Nest uye nemufaro wevaya vane foni yekuSouth Korea izvi zvazoita sezvazviri maererano nezvakatumirwa neReddit, uko vashandisi vanoti varikutoshandisa iyo nyowani. Sekureva kwevanoshandisa social network, […]
Google ichadzivirira maBrowser-based mabhurawuza kubva pakuwana iyo Chrome Sync ficha
Google Chrome inogadzirwa zvichibva pane yakavhurika-sosi injini Chromium, kunyangwe ichipa mamwe masimba makuru mabhurawuza seOpera neMicrosoft Edge. Icho chokwadi chekuti munhu wese anogovera imwecheteyo kodhi yekodhi ine mabhenefiti akakura pamusoro pekutanga mabasa, tichifunga kuti chero shanduko muChromium pachayo inoguma ichikanganisa munhu wese, pamusoro pekuve inowirirana nekuwedzera. Zvisinei, izvi […]
YouTube inozivisa kudyidzana nechikwata chekuchengetedza hutano kusimudzira mavhidhiyo neruzivo rwakavimbika
Kukura kwenhau nemavhidhiyo ane ruzivo rwenhema pamusoro peCovid-19, pamwe nezvimwewo zvirwere, zvakakonzera chikuva cheYouTube kuita danho rinozoita kuti vaparidzi venhau venhema varasikirwe nekusvika uye veruzhinji vachakwanisa kuwana data chairo. Izvi zvinodaro nekuti kambani iri yeboka reGoogle yakazivisa […]
Instagram inogona zvakare kuratidza huwandu hweanofarira mumabhuku
Instagram inogona kunge iri kuronga kudzokera nesarudzo ine nharo kwazvo inoitwa mu2019: kubviswa kwenhamba yezvinodiwa mumabhuku akagadzirwa pasocial network. Pamberi, pazasi peimwe pikicha kana vhidhiyo, mushandisi aigona kuona iyo chaiyo nhamba yekufarira iyo posvo yaive nayo. Zvisinei, mashandisiro acho akabvisa maonero aya uye akaisa chiratidzo "chinofungidzirwa" […]
Nintendo 3DS: ruoko runodarika nhamba yeXbox yekutengesa kwemhuri muJapan muna 2020
Kunyangwe iyo Nintendo switchch yasvika inoyevedza mamaki emamiriyoni makumi matanhatu nemasere ekutengesa kubvira payakatangwa, iyo Nintendo 68DS inoramba iri kukunda kukuru kweiyo hofori yeJapan ine zvinopfuura mamirioni makumi manomwe nemashanu mayuniti akatengeswa. Chigadzirwa chacho chakamiswa kugadzirwa gore rakapera, uye nguva pfupi yadarika chakarasikirwa kuwana Netflix, asi ichiri kunakidza. Izvi zvinodaro, sekureva kwedhata rakaburitswa nemagazini yeFamitsu, Huru […]
TikTok inogadziridza marongero ekuwedzera zvakavanzika zvevechidiki maakaundi
TikTok iri kugadzirisa zvimwe zvakavanzika zveapp, ichitarisa kuendesa nharaunda yakachengeteka yekuyaruka kune vechidiki vemazera akasiyana. Nekuda kweizvozvo, kana uchinyoresa paapp, vashandisi vane makore ari pakati pegumi nematanhatu kusvika gumi nemashanu vanozove nekwaniso yekuwana maakaunzi avo, zvichikonzera kutonga kukuru pamusoro peanogona kutaura kana […]
Zvinenge zvese zvakaburitswa! Oppo A93 5G ine yakasarudzika dhata yehunyanzvi yakaratidzwa neChina chinoshanda
Yakaziviswa muna Gumiguru muVietnam seyakapihwa zita rekuti F17 Pro, iyo Oppo A93 iri kuda kugamuchira imwe misiyano ichawedzera kugona kwekushandisa kweiyo netiweki dze5G, mumusika ungangokura mukati megore ra2021. kusvikira izvo zvishoma zvambonzwika nezve chishandiso chitsva, nhasi icho […]
Yekutanga kuvhura: Samsung SmartTag ine zvimwe zvakawanda zvakaburitswa mushure mekuratidzwa muchitupa
Mazuva mashoma apfuura takaona kutaridzika kweSamsung SmartTag ichiziviswa padivi peGreen Buds Pro, yakawanikwa paFacebook. Iye zvino tave nemifananidzo mitsva yekushandurwa kwechishongedzo icho chichava mukwikwidzi mukuru weApple's AirTags ayo anogona kuitwa ehurumende muna 2021. Sekureva kwesosi, […]
Twitter inomisa zvachose account yaDonald Trump yemagariro
Twitter yakazivisa nezuro husiku, Ndira 8, kuti ichavhara zvachose nhoroondo yaDonald Trump yemagariro enhau. Sarudzo iyi yakaitwa maawa mashoma mushure mekunge iyezvino Mutungamiri weUnited States apihwa mukana wekuburitsazve paprofile yake. Kudzokorora, nhoroondo dzepamutemo dzaDonald Trump dzakamiswa kwete paTwitter chete asiwo paFacebook ne Instagram, […]
Teregiramu uye Signal kurodha pasi kunokwira mushure mekunge WhatsApp yazivisa mazwi matsva ebasa
Iwo maTeregiramu uye maSignal maapplication akaona kuwedzera kukuru kwenhamba dzavo dzekurodha kumahofisi makuru ezvitoro mushure mekunge WhatsApp yatanga kumutsa meseji kune vashandisi vayo kuti vagamuchire mazwi matsva ebasa revatumwa. Mukuita, zviyero izvi zvave kushanda kubvira 2016, asi pari zvino vashandisi vazhinji vatanga kuzviziva, kubva zvaMark Zuckerberg […]
Samsung Galaxy S21: zvinhu zvakaburitswa zvinosimbisa bhokisi risina charger rakaisirwa
Apple payakazivisa iyo nyowani iPhone 12 isina chaja mubhokisi, isu tese taitarisira kuti vakwikwidzi havangosekese zano rechiratidzo asiwo kutora tsika imwechete mushure memwedzi mishoma. Zvinoitika kuti hazvina kutora nguva yakareba sekufunga kwedu, sezvo Xiaomi atozivisa iyo Mi 11 isina charger mu […]
Samsung Wireless Charger Duo 2 uye Pad 2 inoonekwa mumifananidzo mitsva yakaburitswa
Mimwe mifananidzo inotenderera paInternet inogona kutipa mamwe matipi ezvinotarisirwa kune zviviri zvinotevera zveSamsung - iyo Wireless Chaja Duo 2 uye Wireless Chaja Pad 2. Zvigadzirwa aya maviri akasiyana majaja asina waya, ayo anosvika sevatevedzeri vemamodeli acho inowanikwa pamusika. Maererano ne […]
Lenovo ThinkReality A3 inguva itsva magirazi eAR emakambani ane Snapdragon XR1
Sokudziya kweCES 2021, kunoitika saMuvhuro uno (11), Lenovo akazivisa dzimwe dzenyaya huru mumazuva apfuura. Kambani yekuChinese yakagadzirisa mutsara wayo weIdeaPad nemamodeli ane AMD, Intel, uye Snapdragon machipisi, akafumura iyo Yoga AiO nyowani ine michina yakasimba kwazvo, uye akatopinda muchikamu chemalaptop makuru anotakurika mu […]
Dudziro neMutauro wako
Zvimwe Kubva Kwedu Nhau Chikamu